नेता उज्वल थापाको निधन भएपछि परिवारले भावुक हुँदै दियो शुभचिन्तकलाई यस्तो संदेश | समाचार
June 1, 2021 June 1, 2021 NepstokLeaveaComment on नेता उज्वल थापाको निधन भएपछि परिवारले भावुक हुँदै दियो शुभचिन्तकलाई यस्तो संदेश
काठमाडौं । विवेकशील साझा दलका नेता उज्वल थापाको निधन भएको छ । उनको उपचारका क्रममा मंगलबार अपराहृन ४ बजेर २५ मिनेटमा निधन भएको हो । संक्रमित रहेका थापाको मेडिसिटी अस्पतालमा भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार जारी राखिएको थियो । आज दिउसो मात्र भेन्टिलेटरवाट निकालेको जानकारी दिएको अस्पतालले परिवारको मन्जुरी विना अन्य कुरा बताउन नमिल्ने जनाएको थियो । काठमाडौंको मेडिसिटी अस्पतालमा उपचार गराइरहेका थापाको आज निधन भएको विवेकशील साझाका संयोजक मिलन पाण्डेले पुष्टी गरेका हुन्।
उनको मृत्यु भएपछि सामाजिक संजाल मार्फत उज्वल बहादुर थापाको परिवारले शुभचिन्तकलाइ जानकारी गराउंदै यसो भनेका छन् जुन तल पढ्नुहोस :
उज्वल थापा हामीबिच रहनुभएन ।
हाम्रा छोरा, श्रीमान्, दाइ, भान्जा, मित्र, काका, ठूलो बुबा, नाति, मामा, हजूरबुबा, ज्वाइँ, भिनाजु, विवेकशील अभियान तथा विवेकशील नेपाली दलका संस्थापक, विवेकशील साझा पार्टीका पूर्व संयोजक, उद्यमी, सामाजिक उत्प्रेरक, हाम्रा प्रिय उज्वल बहादुर थापा, ४४, हामी सबैको अथक प्रयास, सहयोग र प्रार्थनाका बाबजुद (२०७८ साल जेठ १८ गते, अपराह्न ४:२५ बजे) हामीबिच रहनु भएन ।हामी उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गर्दछौँ ।
उहाँले प्रभाव पारेका जिन्दगीहरू र उनीहरूका सफलताहरू; नेपालको राजनीतिक प्रणालीको सुधार गर्न उहाँले गर्नुभएका हस्तक्षेपहरु; युवाहरूलाई राजनीतिको मूलधारमा समावेश गर्न उहाँको उत्प्रेरणा तथा सहयोग लामो समयसम्म सम्झिइनेछ र त्यसलाई इतिहासले सकारात्मक किसिमले मूल्याङ्कन गर्नेछ भन्ने हामीलाई लागेको छ । उज्वल थापा व्यक्ति मात्र नभई, एउटा दर्शन र विचार पनि हो र सोहीमा उहाँ जीवन्त रहनु हुनेछ भन्ने हाम्रो अनुभूति हो । उहाँले देखेका सपना पूरा गरी हरेक नेपालीको मुहारमा खुसी ल्याउन हामी सबै दृढ संकल्पित छौँ ।
अन्तिम पटक गरिएको कोरोना भाइरस परीक्षणमा नतिजा नेगेटिभ रहेको भए पनि अहिलेको संक्रामक रोगको समयमा उहाँको अन्तिम संस्कार एउटा साधारण पारिवारिक तवरले सम्पन्न गर्ने परिवारको इच्छा भएकोले सम्भव भएसम्म सहभागी नभइदिनुहुन हामी आग्रह गर्दछौँ । उज्वल बहादुर थापाको परिवार, साथी र शुभेच्छुकहरूको तर्फबाट, २०७८ जेठ १८ गते
को हुन् उज्जल ?
आफूलाई राजनीतिक अभियानकर्मी बताउने थापाको अध्यक्षतामा सन् २०१३ मा विवेकशील नेपाली पार्टी स्थापना भएको थियो। उनले सन् २०१९ को अक्टोबर महिनामा उक्त जिम्मेवारी छाडेका थिए। करिब एक दशकदेखि राजनीतिमा संलग्न रहँदै आए पनि उज्ज्वल प्रमुख राजनीतिक पार्टीमा आबद्ध लोकप्रिय नेता होइनन्। उनी राजनीतिमा संलग्न त छन्, तर उनको उपस्थिति प्रत्यक्ष देखिने गरी बनिसकेको छैन। उनको पार्टीले पहिले विवेकशील नेपाली दलका रूपमा र पछि विवेकशील साझा पार्टीका रूपमा चुनावमा भाग लिँदा पनि खासै सफलता पाउन सकेन।
चवालीस वर्षीय थापा देशका अरू राजनीतिज्ञका भिडमा एक खालको ‘अपवाद’ भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समाजशास्त्र विभागकी उपप्राध्यापक नीति अर्याल खनाल बताउँछिन्। उनले भनिन्, “विभिन्न किसिमका सङ्घर्ष गरेर आएका र जनताले विश्वास गरेका नेताहरू विभिन्न किसिमका राजनीतिक खिचातानी र भ्रष्टाचारमा संलग्न हुँदा जनताले उहाँहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण एकदम नकारात्मक भएर गएको छ।”
“उज्ज्वल थापाहरूको ‘नेपाल खुल्लै छ’ भन्ने अभियानले राजनीतिक कारणले आयोजना गरिने बन्दका कारण उत्पन्न निराशाको वातावरणविरुद्ध आवाज उठायो। त्यस्तै महिला हिंसाविरुद्ध बालुवाटारमा अघि बढाइएको अभियानमा पनि उहाँहरू सक्रिय भएर लाग्नुभयो र युवाहरूलाई परिचालन गरेर वैकल्पिक राजनीतिक धार स्थापना गर्न उहाँहरू सक्रिय हुनुभयो।”
त्यसबाट सहरी मध्यमवर्गको ध्यान तान्न सफल भएको र पछिल्लो समय जुटेको सहयोगले थापालाई प्राप्त समर्थन देखाउन उनले बताइन्। “युवापुस्ता परिवर्तनको भोका छन् र उनीहरू उज्ज्वलजस्ता नेताहरूले केही गर्न सक्छन् र उहाँहरू जस्ता व्यक्तिहरू निको भएर छिटो समाजसेवामा फर्किनुभयो भने हाम्रो लागि सम्भावना छ भन्ने ठान्छन् भन्ने देखाएको छ। यो एकदमै अर्थपूर्ण छ।” प्रविधि उद्यमी हुँदै राजनीतिमा प्रवेश गरेका थापाले अमेरिकाबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेका छन्।
थापाको व्यक्तित्व पनि सरल र शालिन छ। कुनै तामझाम छैन। उनी सार्वजनिक रूपमा धेरै देखिँदैन थिए, तर धेरैका मनमा बसेका थिए। अहिले उनको पक्षमा उर्लिएको सद्भावले त्यही झल्काएको छ। उनी राजनीतिमा छन्, तर राजनीतिक महत्वाकांक्षा उनमा छैन। राजनीति बदल्ने हुटहुटी र दृढता भने छ। बिपी कोइरालाले भनेजस्तो उनमा ‘ठूलो मान्छे होइन, असल मान्छे हुने’ ध्येय देखिन्छ।
बाग्लुङको बडिगाड गाउँपालिकामा चट्याङ लागेर एक बालकको मृत्यु , एक घाइते
उपभोग्य वस्तु आपूर्ति गर्न पास चाहियो ? यसो गर्नुहोस्
भक्तपुरमा सुत्केरी सेक्न झ्याल ढोका बन्द गरेर कोइला बाल्दा दिदीको मृत्यु, आमा र सुत्केरी बहिनी बेहोस